Daawo Muuqaal Cajiib ah “Yaxaas Iyo Libaaxyo weerar ku ah Cawl, Yaase ku guulaysan doona cunista Cawshaasi?! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo Muuqaal Cajiib ah “Yaxaas Iyo Libaaxyo weerar ku ah Cawl, Yaase ku guulaysan doona cunista Cawshaasi?!
Daawo Muuqaal Cajiib ah “Yaxaas Iyo Libaaxyo weerar ku ah Cawl, Yaase ku guulaysan doona cunista Cawshaasi?!
Nov 19, 2016MAQAALO, MUUQAAL
Sidaan la socono yaxaaska waa mid kamid ah kuwa loogu yeedho xamaaratada, wuxuuna ku nool yahay inta badan wabiyadda, inkastoo wadamo qarkood uu kaga nool yahay badda, iyo meelaha kale oo biyaha ay galaan guud ahaanba, wuxuuse u badan yahay wabiyadda.
Qaaradda Afrika waa meesha kaliya uu aadka ugu badan yahay yaxaasyadda, hadaba waxaan maanta ku eegi doonaa waddanka Zambia gaar ahaan wabiga Luwanga ee dalkaasi, waxaa ku nool yaxaas aad u weyn midkaasi oo ay ka amar qaataan dhamaan yaxaasyadda kale.
Yaxaaskaani aadka u weyn wuxuu cunaa ama weerar ku hayaa dhamaan wixii wabiga kasoo agdhawaada, cidana uma turo, cidii maamulkiisa iyo hogaankiisa muran gelisana waa mid noloshiisa ku qamaaray, sidaasi darted yaxaasyadda ku nool wabiga guud ahaan isaga la,aantiis waxba ma sameeyaan, la,aantiisna ma guursan karaan, waa in uu isaga marka hore soo guursadaa yaxaasyadda naagaha ah ee ku nool wabiga.
Ugudanbeyntii waxaad barnaamijkaani ku daawan doontaa, sida yaxaaska uu weerar halis ah ugu qaaday Cawl, waxaa sidaasi oo kale Cawsha weerar kusoo qaaday Libaaxyo, laakiin labadda dhinac midkee ayaa hantay in ay ku waliimaystaan Cawshaasi.
Muuqaal lagu eegaayo xaaladaas halkaan hoose kadaawo
Previous PostDaawo Sawiro: Wararkii ugu dambeeyey qaraxii saaka ka dhacay degmada Xamarweyne ee Muqdisho! Next PostGuddomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir oo shaqada looga joojiyay si kumeel gaar ah (Akhriso)!!